प्राण त्याग्नुअघि सुशान्तले बुबासँग विस्तारै कुरा गर्न छाडेका थिए, भावुक हुँदै सुशान्तका बुबाले यसो भने – Sanchar Patrika
प्राण त्याग्नुअघि सुशान्तले बुबासँग विस्तारै कुरा गर्न छाडेका थिए, भावुक हुँदै सुशान्तका बुबाले यसो भने
June 28, 2020 261
एजेन्सी । भारतीय लोकप्रिय नायक सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको खबरले यतिबेला बलिउड शोकमा छ । अझ गहिरो शोकमा छ सुशान्तको परिवार । सुशान्तको र्मत्युसँगै उनका बाबु केके सिंह अझै भावविह्वल अवस्थामा रहेको भारतीय मिडियाले जनाएको छ ।
चार छोरीपछि जन्मिएका हुन् सुशान्त । सुशान्तका पिता केके सिंहले भारतीय सञ्चार माध्यमसँग आफ्ना छोराबारे खुल्दै भने सुशान्तका लागि ३ वर्षको भाकल गरेका थियौँ । तर बिचबाटोमा नै छोराले अप्रिय कदम चालेर हामीलाई नै छाडेर गयो । म कसरी बिर्सौ रु यो असैह्य पिडा ?
उनले भक्कानिदै भने ।
निकै कठोर तपस्यापछि जन्मिएका सुशान्तलाई सम्झिँदै उनका बाबु केके सिंहले भने सुशान्तलाई हामी भगवानको उपहार मान्दथ्यौँ । जसका लागि यति धेरै भाकल गरिन्छ उनीहरुमाथि नै त्यस्तै हुन्छ ।’ उनी फेरी भक्कानिए ।बिहारका मानिसहरुलाई मद्दत गर्नका लागि धेरै सोचेको जानकारी दिँदै केकेले भने सुशान्तले चन्द्रमामा जग्गा किनेको थियो ।
जग्गा हेर्नका लागि उसले ५५ लाखको टेलिस्कोप किनेको सम्मको कुरा मलाई भनेको थियो । उसले त्यो टेलिस्कोपबाट आफ्नो जग्गा हेरिरहन्थ्यो तर अन्तिम दिन तिर आएर उ म सँग पनि बोलेको थिएन । सायद यही परिणामका लागि रहेछ । उनी फेरी भक्कानिए ।
Prevसुशान्तको मृत्यु गर्नुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झगडा भएको खुलासा !
Nextदोलखाबाट एक गर्भवतीको हवाई उद्धार
धुलिखेल अस्पतालका थप ३ नर्समा देखियो कोरोना
बच्चै देखि खेल्ने साथीले, विदेशवाट पनि संगै आएर पैसाका लागि लिए ज्या”न